Home News UK oo Dadkeeda uga digtay in ay usoo Safraan Soomaaliya
Wasaaradda arrimaha dibadda iyo barwaaqa sooranka dowladda Ingiriiska ayaa Warsaxaafadeed ay soo saartay uga digtay muwaadiniinteeda in ay u safraan Soomaaliya,balse ay tagi karaan magaalooyinka Hargeysa iyo Berbera marka ay safaro muhiima halkaasi ku tagayaan.
Warka ka soo baxay Ingiriiska ayaa loogu baaqay muwaadiniintiisa jooga Somaliland in ay muujiyaan feeginaan dheeri ah, isla markaana aysan tagin meelaha la isugu yimaado.
Digiinta ay dowlada UK u direyso muwaadiniinteeda jooga Soomaaliya iyo kuwa qorsheynaya in ay u safraan halkaasi ayey sheegtay in ay cabsi badan ka qabto afduub iyo weeraro ay Al Shabaab ay ka geystaan gudaha Soomaaliya.
Sidoo kale muwaadiniinta British-ka ah ee ku sugan Soomaaliya ayey uga digtay dowladda Ingiriisku in ay ku safraan Maraakiibta iyo Doomaha isticmaala biyaha Soomaaliya,waxaana ay sheegtay in ay jirto halis uga iman karta kooxaha Burcadbadeeda Soomaalida.
UK ayaa dhowr jeer oo hore muwaadiniinta ka jooga Soomaaliya u jeedisay digniino dhanka safarka ah oo ku aadan sababo dhanka amMaanka ah.